Gantaallo xalay lagu garaacay caasimadda Eretariya ee Asmara - Haldoornews | Haldoornews
Gantaallo xalay lagu garaacay caasimadda Eretariya ee Asmara
Wararka ka imaanaya caasimadda dalka Eritrea ee Asmara ayaa sheegaya in qaraxyo ka dhaceen magaalada saacado uun kadib markii sarkaal ka soo jeeda gobalka Tigreyga ee dalka Itoobiya uu ku hanjabay in ay weerari doonaan.
Qaraxyadaan ayaa imaanaya 10-maalmood kadib markii uu dagaal ka dhex qarxay ciidamada dawladda federaalka Itoobiya iyo ciidamada daacada u ah xisbiga xukuma gobolka Tigray ee TPLF.
Mas’uuliyiinta gobalka Tigreyga ayaa madaxweynaha Eritrea, Isaias Afwerki ku eedeyay inuu la saftay ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
Dadka degan caasimadda Eritrea ee Asmara ayaa BBC-da u sheegay inay maqleen qaraxyo waaweyn oo ka dhacaya gudaha magaalada.
Inkasta oo aan si dhab ah loo ogeyn waxa ka socda caasimadda Asmara haddana qaraxyadu waxay dhaceen saacado uun ka dib markii sarkaal sare oo lagu magacaabo Getatchew Reda uu ku hanjabay in ay gantaallo la beegsan doonaan Ereteriya.
Ciidamada Tigreega ayaa sidoo kale la sheegayay in ay ka dambeeyen weeraradii gantaallada ahaa ee Jimcihii lagu qaaday laba garoon diyaaradeed oo kuyaala gobolka Amxaarada ee Itoobiya.
Sabtidii maantana waxaa jiray warar sheegaya dagaallo ka dhacay xadka ay wadaagaan Ereteriya iyo Itoobiya waxaana dagaalkaas ku dhaawacmay askar loo qaaday dhaawacyadooda isbitaallada.
Qalalaasaha Tigraay: “Xasuuq ka dhacay” gobolka Tigray ee Itoobiya
Hayadda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa maanta hsaacisay inay xaqiijisay xaquuq ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, kaasoo ay sheegtay in lagu dilay dad badan oo ay suuragal tahay inay gaadhayaan boqollaal ruux.
“Waxaan xaqiijinnay xasuuq loo geystay dad shacab ah oo aad u badan, kuwaasoo u muuqday inay yihiin dad magaalada ka xamaasha oo aan sinaba ugu lug lahayn howl-galka milatari ee socda. Tani waa musiibo naxdin leh oo inta ay la egtahay uu sheegi karo waqtiga oo kaliya maadaama adeeggii isgaarsiinta ee gobolka Tigray uu wali xiran yahay,” ayuu yidhi Deprose Muchena, oo ah agaasimaha Amnesty International ee Bariga iyo Koonfurta Afrika.Sarkaalka u hadlay hay’adda ayaa dalbaday in sida ugu dhakhsiyaha badan dib loogu fasaxo khadka isgaarsiinta ee deegaankaas.